Toerana filokana an-tserasera Armenianina - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(534 vato, average: 5.00 avy tany 5)
Ny filokana an-tserasera any Armenia dia avela ary hiroborobo fatratra, satria ny karazana filokana rehetra amin'ny Internet dia ara-dalàna araka ny lalànan'ny filokana amin'ny Internet ao Armenia. Ao amin'ny firenena dia samy mpikirakira aterineto ao an-toerana miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny fanjakana, ary vahiny.
Satria miteny amin'ny teny rosiana ny olom-pirenena Armeniana, afaka mividy filokana amin'ny aterineto any amin'ny tranonkala an-tserasera manolotra ny tolotr'izy ireo amin'ny teny Rosiana. Na izany aza, ny tranonkalan'ny vahiny amin'ny fiteny hafa dia malaza amin'ny mpilalao Armeniana. Mobile gambling is malaza be any Armenia ihany koa, satria mitombo hatrany ny habetsaky ny tompon'ny finday samihafa. Hitantsika ao amin'ny katalaogy an-tserasera ny filokana izay amin'ny ankapobeny ny firenena dia tena tsara kokoa ho an'ny fampiroboroboana ny tany sy ny filokana an-tserasera.
Lisitry ny Top Sites 10 Armeniana Online Casino
Ny filokana ao Armenia
Ny tantaran'ny indostrian'ny filokana ao Armenia dia manomboka amin'ny taonjato faha 20. Tao amin'ny 1936 Armenia no lasa Repoblika Sovietika. Ny hany lozam-pahaizana ara-dalàna ao amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany dia nilatsaka tamin'ny fifaninanana ary ny Lottery an'ny fanjakana. Raha ny marina, dia tafiditra ao amin'ny indostrian'ny filokana i Armenia taorian'ny nirodanan'ny Firaisana Sovietika. Ny efitrano filokana voalohany tao amin'ny firenena dia nosokafana tamin'ny 1990, ary niseho tao amin'ny 1991 ny casino voalohany.
Ankehitriny, ireo orinasa mpiloka amin'ny filokana dia miasa ao Armenia amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny trano bingo, casinos, boumakers, sns. Izy rehetra dia miasa amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana nomen'ny Minisiteran'ny vola ny Repoblikan'i Armenia. Iray amin'ireo orinasa mpilalao goavana ny Vivaro Betting, naorina ao amin'ny 2008. Anisan'ireo tsena hafa ny Totto Gaming, Goodwin-Bet ary Yntanekan Loto. Na dia teo aza ny fanoherana mafy nataon'ny mpiloka an-tsokosoko, tao amin'ny 2014 ny Parlemanta Armeniana dia nandidy lalàna iray izay nanaiky fa tokony ho any amin'ny faritra fizahan-tany avokoa ny casinos rehetra ao amin'ny firenena, toa an'i Jermuk, Tsakhkadzor, Sevan, sns.
Gazety an-tserasera Armeniana sy filokana
Armenia dia firenena iray tany am-boalohany sy fahiny manana loko tsy hay hadinoina ary toetra mahavariana. Izy io dia mampifangaro fihetsika mitandrina amin'ny fakan-tantara sy ny maoderina ary ny teknolojia vaovao. Mazava ho azy, fialan-tsasatra any Armenia, mendrika ny hanandrana ny kocacak tsara indrindra eto an-tany ary handany fotoana amin'ny filokana. CasinoToplists dia nanapa-kevitra ny hamantatra hoe manao ahoana marina ny filokana amin'ny Armenia maoderina an-tserasera sy amin'ny kasino terrestrial.
Casino ao Armenia:
Ny casino an-tserasera dia nahazo alalana avy amin'ny mpandraharaha manana fahazoan-dàlana any Armenia;
Ireo mpandraharaha an-tserasera vahiny tsy manana fahazoan-dàlana amin'izao fotoana izao dia tsy voarara. Afaka milalao ianao;
Amin'izao fotoana izao, resahina ny volavolan-dalàna momba ny fanamafisana ny fidirana amin'ireo mpandraharaha vahiny;
Raha vao manomboka ianao dia fitsipika fohy momba ny fomba hanombohana milalao an-tserasera;
Tantara sy ny toerana misy an'i Armenia;
Ny trano filokana an-tanety malaza indrindra: "Senator", "Shangri La";
Zavatra mahaliana momba an'i Armenia sy Armeniana;
Armenia dia firenena iray tany am-boalohany sy fahiny manana loko tsy hay hadinoina ary toetra mahavariana. Izy io dia mampifangaro fihetsika mitandrina amin'ny fakan-tantara sy ny maoderina ary ny teknolojia vaovao. Mazava ho azy, fialan-tsasatra any Armenia, mendrika ny hanandrana ny kocacak tsara indrindra eto an-tany ary handany fotoana amin'ny filokana. Ny CasinoToplists dia nanapa-kevitra ny hamantatra hoe manao ahoana marina ny filokana amin'ny Armenia maoderina, na amin'ny tany na amin'ny casino an-tserasera.
Ny lalàn'i Armenia momba ny filokana - tantara ara-tantara
1921 - 1928 Armenia dia ao amin'ny ZFSFR ary avy eo ny USSR. Ny orinasa filokana ao amin'ny firenena dia avela. Nanomboka tamin'ny 1928, ny fandrarana ny faritany manontolo an'ny USSR.
1936 Armenia ao amin'ny USSR amin'ny maha repoblika sendika azy. Avela ny hazakaza-kolo any Yerevan sy ny loteria.
1991 Lalàna momba ny fahazoan-dàlana: Fanapahan-kevitry ny filankevitry ny minisitry ny Repoblikan'i Armenia No. 161. Fanokafana ny casino voalohany ao Yerevan. Ny Ministeran'ny Vola dia manome lisansa.
1992 Ny lalàna momba ny haba-bola -70% amin'ny vola azo avy amin'ny banky dia manome ny fanjakana.
1998 Ny lalàna "Amin'ny fandoavam-bola raikitra" - ny fandaminana filokana ao amin'ny firenena dia nanjary mora kokoa ary nahazo tombony bebe kokoa.
2000 Ny filoha Robert Kocharian dia nanao sonia ny lalàna No. 102 “Momba ny lalao mandresy sy ny trano filalaovana” - mivoatra sy mihanaka ny indostrian'ny filokana. Fahazoan-dàlana amin'ny fanokafana trano filalaovana na trano filalaovana. Afaka milalao ianao mandritra ny 21 taona.
2001 Ny lalàna "Amin'ny fahazoan-dàlana" - ny fahazoana fahazoan-dàlana dia miorina amin'ny tetikady sarotra, ahena ny filokana.
2004 Ny lalàna “Amin'ny lalao misy fandresena sy trano filokana.” Ny fiverenan'ny milina fikajiana dia 86%. Ny halaviran'ny casino amin'ny renivohitr'i Yerevan dia 50 km farafaharatsiny.
2016 - 2017 Fanitsiana ny lalàna momba ny adidy. Ny fiakaran'ny vidin'ny fahazoan-dàlana ho an'ireo mpamaky boky an-tserasera dia in-5 (207,000 1 $, XNUMX tapitrisa $). Lefitra. Ny minisitry ny Vola Armenia Pavel Safaryan dia nanolotra volavolan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana hanao hetsika fahazoan-dàlana ho an'ireo mpandraharaha filokana amin'ny filokana ivelany. Amin'izao fotoana izao dia dinihina ny lalàna.
Raha milalao amin'ny casino an-tserasera any Armenia ianao, izay manana fahazoan-dàlana ofisialin'ity firenena ity - ara-dalàna tanteraka ny hetsika ataonao.
Azonao atao ny milalao amin'ny tranokalan'ny mpandraharaha vahiny, satria tsy voarara io fotoana io ary tsy arahana. Noho izany, azonao atao ny misafidy izay trano misy alalana iraisam-pirenena ofisialy.
Raha mbola ekena ny lalàna momba ny fahazoan-dàlana ireo mpandraharaha vahiny dia mety hikatona ny fidirana amin'ny casinos iraisam-pirenena tsy misy fahazoan-dàlana mifandraika amin'izany.
Ny endriky ny adihevitra momba ny famoahana ny casino vahiny dia mbola tsy mazava, fa raha mbola azon'ireo Armeniana safidy malalaka ny milalao ao amin'ny casino amin'ny ankamaroany amin'ny aterineto ary tsy atahorana hanidy ny fidirana ary tsy ho afaka hahazo ny fandreseny izy.
Ahoana no hanombohana milalao an-tserasera ao Armenia?
Misafidiana casino . Ny fepetra fototra dia ny fahamendrehana, ny fahazoan-dàlana ary ny fanamarihana tsara. Manoro hevitra ny casino izahay, izay nandalo ny andrana - raha hanao an'io, tandremo ny tsanganana eo ankavanana.
Mianatra amim-pitandremana ny casino izahay . Raha manapa-kevitra ny hilalao vola ianao, dia tokony hofantarinao aloha ny momba ny zonao sy ny lalànao. Ny fampahalalana rehetra dia ao amin'ny tranokalan'ny casino an-tserasera amin'ny sehatra ho an'ny daholobe. Diniho manokana ireto hevitra manaraka ireto:
Fahazoana fahazoan-dàlana, adiresy ary fifandraisana amin'ny casino (telefonina, chat);
Ny hevitry ny mpilalao amin'ny tambajotra (tokony ho tsara sy miiba, raha tsy izany dia PR izy io, na ilay antsoina hoe "mainty" PR;
Fepetran'ny bonus sy ny filokana. Inona no atao hoe filokana, ho hitanao eto.
Ny fanontaniana ara-bola . Ny trano filokana vahiny dia manolotra safidy maromaro amin'ny fidirana sy fisintonana vola. Ampahafantaro, misy eo amin'izy ireo ve izay mety aminao. Tandremo ny vola ahafahan'ny lalao milalao. Ary koa ny fijerena ireo fepetra sy fepetra amin'ny fisintonana ny fandresena (ny casino sasany amin'ny fandresena lehibe dia mamindra vola amin'ny ampahany).
Fomba manokana :
Fanamboamboaran-tsarimihetsika kazarana sy tranonkala tsara
Ny fisian'ny lalao mahaliana;
Mila maka ilay rindrambaiko aho ary inona ny toetra ara-teknika amin'ny ordinatera?
Azo atao ve ny milalao maimaim-poana amin'ny fomba fitsapana?
Rafitra fahatokisana ho an'ny mpanjifa - bonus, tamberim-bidy sns.
Manoro hevitra izahay ny hilalao voalohany amin'ny maody fitsapana ary hamaky tsara ny fitsipiky ny lalao. Tena marina izany amin'ny lalao karatra (baccarara, blackjack, sns.).
Mampahatsiahy anao izahay fa ny lavitra dia mijanona ao amin'ny fandresena hatrany hatrany ny casino, fa manana fotoana foana ianao handany fotoana mahaliana ary, angamba, ho tsara vintana ianao. Mba hifehezana tsara kokoa ny kitapom-bolanao sy hanitarana ny fahafinaretana amin'ny lalao, vakio ny fizarana momba ny rafitra sy ny paikadin'ny lalao.
Ireo casinos malaza indrindra any Armenia
Any Armenia, misy trano filokana manankarena izay manome ny vahiny ny fepetra rehetra amin'ny lalao milay ary betsaka kokoa aza. Ny fanovana tato ho ato ny lalàna dia tsy nampiova izany toe-javatra izany.
Ny trano filokana tsara indrindra miasa ivelan'i Yerevan, eo amin'ny lalana mitondra mankany amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ao Zvartnots.
Casino "Senatera" dia toeram-pialamboly izay misy trano filokana, trano fisakafoanana, klioba ary fisotroana fisakafoanana. Nisy fandaharana seho tany am-boalohany nalamina ho an'ireo vahiny. Isaky ny sabotsy dia misy ny famoriam-bahoaka. Ao amin'ny "Senator" dia afaka milalao roulette, blackjack, karazana poker sy milina slot maromaro ianao.
Shangri La Casino dia 2 km fotsiny ny faran'ny tanànan'ny tanàna. Ny andrim-panjakana dia mitazona ny bara hajaina indrindra, manome serivisy amin'ny haavon'ny fenitra iraisampirenena: latabatra lalao am-polony, efitrano VIP, toerana maoderina an-jatony, bara telo, trano fisakafoanana misy nahandro Armenianina sy kontinanta. Hetsika sy vazivazy tsy tapaka tsy maintsy atao.
Mihabetsaka, ny andrim-panjakana manova ny ahiahin'ny mpilalao rehetra. Tsy ela akory izay dia nanomboka niseho fitsangatsanganana junket. Ny vahiny ao amin'ny casino dia atolotra amin'ny vola napetraka, tsy ny famindrana, ny fampiantranoana ary ny karajia maromaro ihany, fa ny programa fitsangatsanganana manankarena ihany koa.
Toerana misy an'i Armenia sy tantara ara-tantara fohy
Ny Repoblikan'i Armenia dia fanjakana kely araka izay fepetra rehetra, manodidina ny 30 arivo kilometatra kilometatra kilometatra ary ny mponina dia kely noho ny 3 tapitrisa. Fa manankarena tokoa ny tantaran'ity zoron'ny planeta ity!
I Armenia dia any atsinanana Atsinanana, any Transcaucasia. Ny mpifanila vodirindrina akaiky indrindra amin'ny firenena dia i Georgia, Azerbaijan, Torkia, Iran, Nagorno-Karabakh. Ny renivohitra dia Yerevan, ny tenim-panjakana dia Armeniana, fa saika ny olona rehetra miteny Rosiana tsara.
Tena mahomby tokoa ny toerana misy an'i Armenia, ny marika voalohany fandaminana dia nanomboka tamin'ny vanim-potoana 1.9 tapitrisa taona lasa izay. I Armenia Lehibe dia teo amin'ny sarintanin'i Herodotus. Nandritra ny taonjato maro, ny faritany dia ampahany tamin'ny fanjakana sy empira isan-karazany, fa ny fari-taniny maoderina dia azon'ny firenena tamin'ny taonjato faha-roapolo ihany. Tamin'ny 1991 dia lasa fanjakana mahaleo tena i Armenia - repoblika iray an'ny filoham-pirenena.
Armenia amin'ny sarintany Azia
Matenadaran . Adiresy: 53 Mashtots Avenue, Yerevan 0009, Armenia.
Park of lovers . Adiresy: 21 Marshal Baghramyan Ave, Yerevan 0019, Armenia.
The Mosque Blue . Adiresy: 12 Mesrop Mashtots Ave, Yerevan 0015, Armenia.
Tranom-bakoky ny tantaram-pirenena ao Armenia . Adiresy: Kianja Repoblika 4, Yerevan, Armenia.
Park Victory . Adiresy: Azatutyan Ave, Yerevan, Armenia.
Zavatra mahaliana momba an'i Armenia sy Armeniana
Armenia no firenena voalohany manerantany hanaiky ny Kristianisma ho toy ny fivavaham-panjakana.
Ny fiteny Armeniana dia an'ny vondron-teny manokana - Paleobalkan. Ny teny grika ihany no velona sy mifandray.
Ny abidia Armeniana dia niseho talohan'ny abidia sirilika. Tamin'ny 406 dia Mesrop Mashtots no namorona azy, ary heverina ho iray amin'ireo lafatra indrindra eto an-tany (miaraka amin'ny Koreana sy Zeorziana).
Ny Arar an'ny Tendrombohitra Ararat dia tandindon'ny an'i Armenia, fa hatramin'ny 1921 dia miorina eo amin'ny faritanin'i Torkia.
Ny apples Armeniana dia anarana mahazatra ho an'ny abrikôla any Eorôpa.
Armenia no toerana nahaterahan'ny jeneraly lehibe. Maherin'ny 80 mpiadin'i Byzantium no Armeniana. Ary ny tanàna kely iray dia nanome jeneraly USSR 2 sy mahery fo 11 an'ny Firaisana Sovietika.
Casino of Armenia, trano filokana tsara indrindra ao Armenia
Ny firenena tsirairay avy dia tsara amin'ny fombany avy, ary ao amin'izy ireo tsirairay avy dia misy zavatra hita sy izay tokony hojerena. Ary i Armenia dia tsy miavaka amin'izany. Raha vantany vao amin'ity repoblika ity dia hahita asa ho an'ny tenany ny mpizahatany tsirairay: misy olona afaka misaintsaina ny fahitany azy, ary misy olona maniry ny fitsangatsanganana toy izay amin'ny fialam-boly any amin'ny toeram-pialamboly, ohatra, amin'ny trano filokana.
Amin'ny ankapobeny dia misy casino valo ao Armenia. Ireto misy trano filokana Flamingo, Faraona, Shangri La, Senatera ary ny hafa. Isaky ny trano filokana ireo, ny mpilalao dia omena karazana lalao filokana sy serivisy ambony kalitao.
Ohatra, ny casino << Shangri La Yerevan >> dia iray amin'ireo trano filokana maoderina indrindra ao amin'ny repoblika. Ny fidirana ao amin'ity casino ity dia $ 100 (ny pass dia omena ny olona mihoatra ny 21 taona monja), fa io vola io dia tsy mandoa ny vidin'ny tapakila fidirana fotsiny: takalo amin'izy ireo ny chips, izay azo lalaovina avy eo. Ahitana efitrano filokana maromaro ilay trano filokana, trano fisakafoanana mahafinaritra << Michelangelo Launch >>, klioba CW ho an'ny mpilalao VIP. Ny trano filokana dia matetika mandray loteria sy fifaninanana isan-karazany miaraka amin'ny fandresena vola, rafitra karatry ny klioba izay manome ny zony hanana serivisy fanampiny (lakozia malalaka, fidirana maimaimpoana sns.).
Ny tranobe casino dia miorina amin'ny 10 km amin'ny lalambe Yerevan-Sevan, izay azo antsoina hoe iray amin'ireo toerana manintona indrindra any Armenia. Ao amin'ny faritry ny toeram-pialamboly Shangri La dia misy fijanonana fiara, natao ho an'ny fiara 100. Noho izany, manahy ny amin'ny toerana handaozana ireo mpilalao fitaterana tsy voatery. Afaka mahatratra ny filokana amin'ny taxi ianao.
Raha tianao dia azonao atao ny mampiasa ny serivisy ao amin'ilay andrim-panjakana ary mangataka fitsidihana lalao. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsangatsanganana maimaim-poana any amin'ny casino (ao anatin'izany ny sidina avy any amin'ny firenen-kafa misy visa), efitrano fandraisam-bahiny maimaim-poana, serivisy VIP, fatiantoka 10% isan'andro miverina ary maro hafa.
Casinos hafa any Armenia
Fitsidihana lalao ao amin'ny casino Armeniana dia atolotry ny orinasa filokana "Sun Palace" , any Yerevan. Amin'ity casino ity dia afaka mifalifaly ianao amin'ny filokana toy ny roulette, Black jack, taolana, baccarat, Caribbean ary poker Rosiana, poker video, misy milina slot mihoatra ny 100 sns. Ho an'ireo mpankafy ny lalao amin'ny taha-be dia be, miasa ny efitrano VIP .
Ny fandresena rehetra amin'ity casino ity dia omen'ny fitantanan-draharaha andrim-panjakana amin'ny vola nofidian'ny mpilalao (euro, robla). Afaka omena mpiambina fiarovana.
Ankoatra ny filokana, ny fitsidihana dia ahitana fitsidihana an-tsambo manodidina an'i Yerevan sy fitsangatsanganana mankany Sevan.
Saingy ny sisin-tany "Senatera" dia eo amin'ny sisintanin'i Argavand ary miaraka. Tayrov. Ao amin'ity casino Armenia ity, ary koa ny safidin'ny mpanjifa, misy fialamboly safidy lehibe atolotra amin'ny efitrano filalaovana maro, toerana fialan-tsasatra, fisotroana iray. Ary tato ho ato, tao amin'ity toeram-pialamboly ity dia nanomboka niasa ny fisakafoanana vaovao iray, izay ahafahanao manandrana lovia amin'ny nahandro Armenianina, Iraniana ary Rosiana.
Milamina ny zava-drehetra, fa ny taona 2013 ho avy, nanapa-kevitra ny casino Armenia hifindra any amin'ny faritra filokana manokana efa voafaritry ny lalàna. Ary hatramin'ny fiandohan'ny taona vaovao dia tsy hisy afa-tsy amin'ny fetra fitantanana ny vondrom-piarahamonina Jermuk, Tsakhkadzor ary Sevan no ahafahana miloka.
Ny fepetra tsy maintsy atao amin'ny toerana misy ny casino dia ny halavirana avy amin'ny hopitaly, sampan-draharaham-panjakana, andrim-panabeazana ary tsangambato ara-kolontsaina sy ara-tantara amin'ny halavirana 500 metatra sy mihoatra, ary koa ny haben'ny velaran'ny faritra misy filokana: ho an'ny casino, tokony ho 250 metatra toradroa izy io, ary ho an'ny lalao misy fandresena - tsy latsaky ny 100 metatra toradroa. Ny minisitra ny fanovana ny toerana misy ny casino dia ny Ministeran'ny Vola any Armenia.
0.1 Lisitry ny Top Sites 10 Armeniana Online Casino
2.1 Ny filokana ao Armenia
3 Gazety an-tserasera Armeniana sy filokana
3.0.1 Ny lalàn'i Armenia momba ny filokana - tantara ara-tantara
3.1 Ahoana no hanombohana milalao an-tserasera ao Armenia?
3.1.1 Toerana misy an'i Armenia sy tantara ara-tantara fohy
3.1.2 Armenia amin'ny sarintany Azia
3.1.4 Zavatra mahaliana momba an'i Armenia sy Armeniana
4 Casino of Armenia, trano filokana tsara indrindra ao Armenia
4.0.1 Casinos hafa any Armenia